mhando dzekuyedza software
Kuru Qa Mhando dzeSoftware Kuedza
Mhando dzeSoftware Kuedza
Muchikamu chino, isu tinotsanangura nzira dzakasiyana dzekuyedza software. Mhando dzakasiyana dzekuyedzwa kwesoftware dzinoitwa kuzadzisa zvinangwa zvakasiyana kana uchiedza software application.
Ad-hoc bvunzo Rudzi urwu rwekuyedzwa kwesoftware haruna kurongeka uye haruna kurongeka uye runogona kuitwa neanobata chero munhu asina chirevo kune chero bvunzo kesi kana bvunzo dhizaini magwaro. Iye munhu arikuedza Ad-hoc kuyedza ane nzwisiso yakanaka yeiyo dome uye kufashukira kwekushandisa kuti ayedze kutsvaga hurema uye kutyora software. Kuedza kweAd-hoc kunoitirwa kutsvaga hurema husina kuwanikwa nezviitiko zvekuyedza zviripo.
Kubvuma Kuedzwa Kugamuchirwa kuyedzwa ndeye yakasarudzika mhando yesoftware kuyedza inoitwa nemugumo mushandisi kana maficha aunzwa nevakagadziri.
Chinangwa chekuyedzwa uku ndiko kutarisa kana software yacho ichisimbisa kubhizimusi ravo nezvinodiwa zvakapihwa pakutanga. Kugamuchirwa bvunzo dzinowanzo nyorwa pakutanga kweiyo sprint (in chikare) uye inzira yevaedzo uye vanogadzira kuti vashande kune kunzwisisana uye kugovana ruzivo rwebhizinesi.
Kuwanikwa Kuedzwa Paunenge uchiita yekuwanika kuyedzwa, chinangwa chekuyedza ndechekuona kana zvirimo muwebhusaiti zvinogona kuwanikwa nyore nekuremadza vanhu. Masheke akasiyanasiyana senge ruvara uye musiyano (yevaravara mapofu vanhu), saizi yemafonti kune vasina kuona, akajeka uye akapfupika mavara ari nyore kuverenga nekunzwisisa.
Agile Kuedza Agile Kuedza rudzi rweyedzo yesoftware iyo inogarisa agile software yekuvandudza maitiro uye maitiro. Munharaunda yeAgile yekuvandudza, kuyedza chikamu chakakosha chekuvandudza software uye kunoitwa pamwe nekodhi. Agile kuyedza inobvumira kuwedzera uye iterative kukodha uye kuyedza.
Kuedzwa kwe API Kuedzwa kweAPI mhando yekuyedza yakafanana neyuniti kuyedza. Imwe yeiyo Software APIs inoedzwa sekuenderana neIPI kududzirwa. Kuedzwa kweAPI kunowanzoitwa nechikwata chekuyedza kunze kwekunge maAPI achiyedzwa kana kuomarara uye inoda kukamurwa kwakakura. Kuedza kweAPI kunoda kunzwisiswa kwese kushanda kweAPI uye kuve nehunyanzvi hwekukodha.
Zvoga kuongororwa Iyi inzira yekuyedza iyo inoita yekushandisa ekuyedza maturusi uye / kana chirongwa chekumhanyisa kesi dzekuyedza uchishandisa software kana tsika yakagadziridzwa bvunzo dzekushandisa. Mazhinji emashandisi emuchina akapihwa yekubata uye yekutamba nzvimbo, zvisinei, pane zvishandiso zvinoda kunyora zvakazara scripting kana programmemate yekuyedza kesi dzekuyedza.
Zvese zviviri Kuedzwa Iyo inozivikanwa zvakare sePair-huchenjeri kuyedzwa, ndeye nhema bhokisi rekuyedza nzira uye nzira yekuyedza uko kwega kwega kwekuisa kunoedzwa muviri yezvipimo, izvo zvinobatsira kuyedza software inoshanda sekutarisirwa neese anogona kubatanidzwa.
Beta Kuedza Iyi mhando yakasarudzika yekuyedzwa kwesoftware kunoitwa nevatengi vekupedzisira vasati varegedza kana kupihwa software kuti vapedze vashandisi. Kubudirira kupedzisa kweBeta kuyedza zvinoreva kugamuchirwa kwevatengi software.
Nhema Bhokisi kuyedzwa Nhema bhokisi kuyedza inzira yekuyedza yesoftware uko testers haidiwe kuziva kodhi kana chimiro chemukati cheiyo software. Nhema bhokisi yekuyedza nzira inotsamira pakuyedza software nezvakasiyana zvinongedzo uye inosimbisa mhedzisiro maringe zvinotarisirwa kuburitsa.
Kudzokera Kuenderana Kuedzwa Rudzi rwe software kuyedzwa kunoitwa kuongorora kuti iyo nyowani vhezheni yesoftware inogona kushanda zvinobudirira pamusoro peiyo yapfuura vhezheni yesoftware uye kuti iyo nyowani vhezheni yesoftware inoshanda zvakaringana netafura dhizaini, dhata dhata uye mafaera akagadzirwa ne yapfuura vhezheni yesoftware.
Boundary Kukosha Kuedzwa (BVT) Boundary Value Kuedzwa inzira yekuyedza iyo yakavakirwa pane pfungwa 'kukanganisa kunowanikwa pamiganhu'. Mune ino nzira yekuyedza, kuyedza kunoitwa zvakanyanya kuti utarise hurema pamiganhu mamiriro. Kana munda uchibvuma kukosha 1 kusvika ku100 saka kuyedzwa kunoitwa kweanokosha 0, 1, 2, 99, 100 uye 101.
Big Bang Kubatanidzwa kuyedzwa Iyi ndiyo imwe yenzira dzekuyedza kuyedza, muBig Bang yekubatanidza kuyedza zvese kana zvese zvakanyanya mamamojimendi akagadzirwa uyezve akabatanidzwa pamwechete.
Pazasi kumusoro Kubatanidza kuyedzwa Pazasi-kumusoro kuyedza kuyedza inzira yekubatanidza kuyedza uko kuyedza kunotanga nezvidimbu zvidiki kana zvidiki-zveesoftware kudzimara kwese kwese uchivhara software yese. Pazasi-kumusoro kuyedza kuyedzwa kunotanga nezvikamu zvidiki zve software uye pakupedzisira kukwira maererano nesaizi, kuomarara, uye kukwana.
Kuedzwa kweBazi Iyo chena bhokisi yekuyedza nzira yekugadzira bvunzo kesi kuyedza kodhi kune ese matavi mamiriro. Nzira yekuyedza yebazi inoitwa panguva yekuyedzwa kweyuniti.
Bhurawuza kuenderana Kuedzwa Yayo imwe yemhando dzediki-dzekuyedza yekuyedza kuyedzwa kunoitwa nechikwata chekuyedza. Bhurawuza kuenderana kuyedzwa kunoitwa kune webhu kunyorera pamwe nemusanganiswa weakasiyana mabhurawuza uye anoshanda masystem.
Kuenderana kuyedza Kuenderana kuyedzwa ndeimwe yemhando dzekuyedza dzinoitwa nechikwata chekuyedza. Kuenderana kuyedzwa kunoongorora kana software ichigona kumhanyisa pane akasiyana Hardware, inoshanda sisitimu, bandwidth, dhatabhesi, webhu maseva, mashandiro ekushandisa, zvigadzirwa zvemagetsi, emulators, kumisikidza kwakasiyana, processor, mabhurawuza akasiyana uye akasiyana mavhezheni nezvimwe.
Chikamu Kuedzwa Rudzi urwu rwekuyedzwa kwesoftware kunoitwa nevagadziri. Chikamu chekuyedza chinoitwa mushure mekupedza kuyedzwa kweyuniti. Kuumbwa kwechinhu kunosanganisira kuyedza boka rezvikwata sekodhi pamwechete pamwe chete pane kuyedza mashandiro emunhu, nzira.
Mamiriro Ekuvharidzira Kwayedza Mamiriro ekuvharidzira kuyedza inzira yekuyedza inoshandiswa panguva yekuyedzwa kweyuniti, uko kunovhenekwa miedzo yezvese zvirevo zvemamiriro senge if, if-else, kesi nezvimwe, mukodhi iri kuyedzwa unit.
Kuedza Kwesimba Kuedzwa kunogona kuitwa seStatic Testing uye Kuedza kweDynamic, kuyedza kweDynamic inzira yekuyedza uko kuyedza kunogona kuitwa chete nekuita kodhi kana software zvinoratidzirwa seDynamic Testing. Kuedzwa kweyuniti, Kuyedza kushanda, kuyedza kudzokorodza, kuyedza kwekuita etc.
Sarudzo Kuvhara Kuedzwa Inzira yekuyedza iyo inoshandiswa muYuniti kuyedza. Chinangwa chekuyedza kufukidza kuyedza ndechekurovedza muviri nekusimbisa dziviriro yega yega mukodhi eg. if, if-else, kesi zvirevo.
End-to-end Kuedza End to end test inoitwa nechikwata chekuyedza uye chakanangana ndechekuyedza kumagumo kusvika kumagumo kuyerera i.e. chaiko kubva kuhurongwa hwekugadzira kusvika pakuzivisa kana kugadzira odhi kusvikira chinhu chadzoka nezvimwe uye kutarisa. Kupera kumagumo kuyedza kunowanzo tarisa kutevedzera chaiwo hupenyu zviitiko uye mashandisiro. Kuguma kumagumo kuyedza kunosanganisira kuyedza ruzivo kuyerera pamashandisirwo.
Kuongorora Kwokuongorora Kuongorora kwekutsvagisa ndeye isina kujairika mhando yekuyedza inoitwa kuti udzidze software panguva imwechete uchitsvaga zvikanganiso kana maitiro ekushandisa ayo anoita kunge asiri pachena. Kuongorora kwekutsvagisa kunowanzoitwa nevanoedza asi kunogona kuitwa nevamwe vanobatika pamwe neveBusiness Analysts, vanogadzira, vashandisi vekupedzisira nezvimwe vanofarira kudzidza mabasa esoftware uye panguva imwechete kutsvaga zvikanganiso kana maitiro zvinoita kunge zvisiri pachena .
Kuenzana Kupatsanura Kuenzana kupatsanura kunozivikanwa zvakare seKuenzana Chikamu Kuparadzanisa inzira yekuyedza software uye kwete mhando yekuyedza yega. Nzira yekuenzana yekuparadzanisa inoshandiswa mubhokisi dema uye grey bhokisi mhando dzekuyedza. Kufananidza kupatsanura kunoisa data rekuyedza mumakirasi eEquivalence semakirasi akaenzana eEquivalence uye makirasi eEquivalence asina kunaka, kupatsanurwa kwakadaro kunovimbisa mamiriro ese akanaka uye asina kunaka anoedzwa.
Kushanda Kuedza Kushanda kuyedza ndeye yakasarudzika mhando yekuyedza kunoitwa nevanoongorora. Basa rekuyedza rinotarisa pakuyedza software ichipesana nedhizaina dhizaini, Shandisa kesi, uye gwaro rinodiwa. Kushanda kuyedza imhando yekuyedza uye hakudi kushanda mukati meiyo software, kusiyana nechena bhokisi kuyedzwa.
Kuedza kweFuzz Kuedza kweFuzz kana kupaza inzira yekuyedza yesoftware iyo inosanganisira kuyedza nezvisingatarisirwe kana zvinowoneka. Iyo Software inoongororwa nekutadza kana mhosho mameseji ayo anounzwa nekuda kwekukanganisa kwekuisa.
GUI (Graphical User Interface) kuyedzwa Mhando iyi yesoftware yekuyedza inovavarira kuyedza iyo software GUI (Graphical User Interface) yesoftware inosangana nezvinodiwa sezvakataurwa muGUI mockups uye Zvakadzama magwaro akagadzirwa. Semuenzaniso. kutarisa kureba uye kugona kweminda yekuisa yakapihwa pane fomu, mhando yemunda wekuisa wakapihwa, i.e. mamwe emafomu mafomu anogona kuratidzwa sebhokisi rekudonhedza kana seti yemabhatani eredhiyo. Saka GUI kuyedza kunovimbisa GUI zvinhu zveiyo software sezvakagamuchirwa GUI mockups, zvakadzama magadzirirwo magwaro, uye zvinoshanda zvinoshanda. Mazhinji emashandisirwo ebvunzo otomatiki anoshanda pane GUI kutora uye kutamba kugona. Izvi zvinogadzira script kurekodha nekukurumidza panguva imwe chete kunowedzera kuyedza pane script yekuchengetedza.
Girazi bhokisi Kuedzwa Girazi bhokisi rekuyedza rimwe zita reWhite bhokisi kuyedzwa. Girazi bhokisi rekuyedza inzira yekuyedza iyo inosanganisira kuyedza zvirevo zvemunhu mumwe, mashandiro nezvimwe, kuyedzwa kweYuniti ndiyo imwe yemaitiro eGirazi ekuyedza
Kuedzwa kweGorilla Iyi mhando yekuedzwa kwesoftware inoitwa nechikwata chekuyedza software, ine zita rinotyisa hazvo? Chinangwa cheGorilla Kwayedza ndeyekushandisa imwe kana mashoma mashandiro zvakakwana kana zvakakwana nekuita kuti vanhu vazhinji vaedze mashandiro akafanana.
Inofara nzira yekuyedza Iyo inozivikanwa zvakare seGolden nzira yekuyedza, iyi mhando yekuyedza inotarisa pakubudirira kuitisa bvunzo dzisingaite iyo software kune yakaipa kana yekukanganisa mamiriro.
Kubatanidzwa Kuedzwa Kubatanidza kuyedza ndeimwe yemhando dzakajairika uye dzakakosha dzekuyedza software. Kana imwechete mayunitsi kana zviyero zvayedzwa nevanogadzira sekushanda saka timu yekuyedza inomhanya nemiedzo inoedza kubatana pakati pezvikamu izvi / chinhu kana akawanda mayuniti / zvikamu. Pane nzira dzakasiyana dzekuyedzwa kweKubatanidza dzinoti, Kumusoro-pasi kuyedzwa kuyedzwa, Kuyedzwa kwepazasi-kumusoro uye mubatanidzwa weaya maviri anozivikanwa seSand muroyi kuyedzwa.
Yemukati Kuedzwa Interface Kuedza kunodiwa kana software ichipa rutsigiro rweimwe kana anopfuura maumbirwo akaita se 'Graphical mushandisi interface', 'Raira Mutsetse Wemukati' kana 'Chishandiso chirongwa cheinternet' kusangana nevashandisi vayo kana imwe software. Nzvimbo dzinoshanda senzvimbo yesoftware yekugamuchira zvigadzirwa kubva kumushandisi uye nekupa zvinobuda kumushandisi. Maitiro ekuyedzwa kweiyo interface anoenderana nerudzi rwechimiro chiri kuyedzwa senge GUI kana API kana CLI.
Zvepasirose Kwayedza Kuedzwa kwepasirese rudzi rweyedzo inoitwa nechikwata chekuyedza software kutarisa huwandu hwesoftware inogona kutsigira Internationalization kureva, mashandisirwo emitauro dzakasiyana, akasiyana maseti emhando, mavara mabhii maviri nezvimwe, Semuenzaniso: Gmail, webhu kunyorera iyo inoshandiswa nevanhu kwese kwese nebasa nemitauro yakasiyana, single ne kana akawanda-byte hunhu seti.
Keyword-inotyairwa Kuedzwa Kiyi kiyi inotyairwa kuyedzwa kwakawanda kweayo otomatiki software yekuyedza nzira kupfuura mhando yekuyedza pachayo. Keyword rinotyairwa kuyedzwa kunozivikanwa sekuita kunoitiswa-kuyedzwa kana tafura-inotungamirwa kuyedzwa.
Kuedza Mutoro Kutakura mutoro rudzi rwekuedza kusiri-kushanda; kuremerwa kuyedza kunoitwa kutarisa maitiro eiyo software pasi peyakajairwa uye pamusoro pepamusoro mamiriro ezvinhu. Kutakura mutoro kunowanzoitwa pachishandiswa otomatiki ekuyedza maturusi. Mutoro wekuyedza unotarisira kutsvaga mabhodhoro kana nyaya dzinodzivirira software kuti iite sezvazvaida pakukwirira kwebasa.
Yemunharaunda Kuedzwa Localization kuyedza mhando yesoftware yekuyedza inoitwa nevanoongorora software, mune iyi mhando yekuyedza, software inotarisirwa kuchinjika kune imwe nzvimbo, inofanirwa kutsigira imwe locale / mutauro maererano neratidziro, kubvuma kuiswa mune iyo chaiyo nzvimbo, kuratidza, font, date nguva, mari nezvimwe, zvine chekuita neimwe nzvimbo. Semuenzaniso. mazhinji webhu kunyorera anotendera sarudzo yenzvimbo senge Chirungu, ChiFrench, ChiGerman kana chiJapanese. Saka kana nzvimbo yatsanangurwa kana kuiswa mukugadziriswa kwesoftware, software inotarisirwa kushanda sekutarisirwa nemutauro wakatarwa / locale.
Kuongorora Kwakashata Rudzi urwu rwekuyedza software, iyo inodaidzira iyo 'mafungiro ekutyora', aya anoshanda uye asiri-anoshanda bvunzo dzinoitirwa kupaza software nekupinza zvisiri izvo dheti senge risiri iro zuva, nguva kana tambo kana kurodha binary faira kana mameseji mafaira inofanirwa kuiswa kana kuisa hombe tambo tambo yeminda yekuisa nezvimwewo zvakare muyedzo wakanaka kune yekukanganisa mamiriro.
Isiri-inoshanda kuyedza Mazhinji maSoftwares akavakirwa kuzadzisa zvinoshanda uye zvisiri-zvinoshanda, zvisingaite-basa sekuita, kushandisika, kutarisisa nezvimwe, Kune marudzi mazhinji ekuyedza senge kuyedzwa kwekuenderana, kuyedza kuteedzera, kuyedzwa kwenzvimbo, kuyedzwa kwekushandisa, kuyedza vhoriyamu nezvimwe, izvo zvinoitwa kuti utarise zvisiri-zvinoshanda zvinodiwa.
Pair Kuedza software yekuyedza software inogona kuitwa nevanoongorora software, vanogadzira kana vaongorori vebhizinesi. Seizvo zita rinoratidzira, vanhu vaviri vakabatanidzwa pamwechete, mumwe kuyedza uye mumwe kuongorora uye kurekodha zvabuda. Pair kuyedza kunogona kuitwazve mukubatanidza tester-yekuvandudza, muedzo-bhizinesi muongorori kana mugadziri-bhizinesi muongorori mubatanidzwa. Kubatanidza vaedze uye vavandudzi mukuyedzwa kwevaviri kunobatsira kuona kuremara nekukurumidza, kuziva chinokonzera, kugadzirisa uye kuyedza kugadzirisa.
Performance Kuedza imhando yekuyedzwa kwesoftware uye chikamu cheinjiniya yekuita inoitwa kuti utarise humwe hunhu hwesoftware senge Kugadzikana, kuvimbika, kuwanikwa. Kuyedza kwekuita kunoitwa neanoshanda enjiniya timu. Kusiyana neYekushanda yekuyedza, Performance Performance inoitwa kutarisa zvisiri-zvinoshanda zvinodiwa. Performance performance inotarisa mashandisiro anoita software mune inotarisirwa uye yepamusoro mibairo yebasa. Pane misiyano yakasiyana kana sub mhando dzekuita senge kuyera mutoro, kuyedza kushushikana, kuyedza vhoriyamu, kuyedza soak uye kumisikidza kuyedza.
Kupinda Muedzo rudzi rwekuedzwa kwekuchengetedza. Kupindirwa kwekupinda kunoitwa kuyedza kuti software yakachengeteka sei uye nharaunda dzayo (Hardware, Inoshanda system, uye network) zviripo kana zvichinge zvarwiswa nemunhu wekunze kana wemukati. Anopinda iye angave munhu / humbavha kana zvirongwa zvakaipa. Pentest inoshandisa nzira dzekumanikidza kupindira (nechisimba kurwisa) kana kushandisa kushaya simba (kutambura) kuwana mukana kune software kana dhata kana Hardware nechinangwa chekufumura nzira dzekuba, kushandisa kana kukanganisa data, mafaera esoftware kana kumisikidza. Kupinda muKwayedza inzira yekubira zvine mutsindo, ane ruzivo rweKupinda muedzo anoshandisa nzira imwechete uye maturusi angashandiswa nemubati asi chinangwa chePenetration tester ndechekuona kushomeka uye kuita kuti vagadzikiswe pamberi pekubira chaiko kana chirongwa chakaipa chichiishandisa.
Kuzvidzora Kuedzwa irwo rudzi rweyedzo yesoftware inoitwa nevanoongorora software semashandiro ekudzokorora bvunzo uye vanogadzira seYuniti regression bvunzo. Chinangwa chekudzokororazve bvunzo ndechekuwana hurema hwakaunzwa kune hurema gadziriso (es) kana kuunzwa kwechinhu chitsva (s). Kudzvinyirira bvunzo ndivo vakanakira kukwikwidza kune otomatiki.
Kuedzazve imhando yekuyedza zvekare inoitwa nevanoongorora software sechikamu chekukanganisa kugadzirisa ongororo. Semuenzaniso. muedzo ari kuongorora iko kugadzirisa kwekukanganisa uye ngatitii kune matatu ematare ebvunzo akatadza nekuda kwekukanganisa uku. Kamwe kana muyedzo aona kukanganisa kwekugadziriswa sekugadziriswa, iye bvunzo anozoedzazve kana kuyedza mashandiro akafanana zvakare nekuita kesi dzekuyedza dzakakundikana pakutanga.
Risk-based Kuedzwa mhando yekuyedza software uye imwe nzira yekuyedza software. MuRisk-based kuyedza, zvinodiwa uye mashandiro esoftware ichaedzwa anoiswa pamberi seCritical, High, Medium uye low. Mune nzira iyi, ese akakosha uye epamusoro ekutanga bvunzo anoedzwa uye iwo anoteverwa neMedium. Kukoshesa kwakaderera kana kushomeka kwengozi kune kuyedzwa kumagumo kana kunogona kusayedzwa zvachose, zvinoenderana nema timescales.
Kuputa kweutsi imhando yekuyedza inoitwa nevanoongorora software kuti vaone kana iyo nyowani yekuvaka yakapihwa neboka rekuvandudza yakagadzikana zvakakwana kureva kuti, kushanda kukuru kuri kushanda sekutarisirwa kuitira kuitisa kuyedza kwakapfuura kana kwakadzama. Utsi hwekuyedza hunotarisirwa kuti uwane 'show stopper' hurema hunogona kudzivirira vanoedza kuyedza iko kushanda zvakadzama. Utsi hwekuyedza hwakaitirwa kuvaka inozivikanwa zvakare sekuvaka bvunzo yekutarisa.
Kuchengetedzwa Kwayedzwa imhando yekuyedzwa kwesoftware kunoitwa nechikwata chakasarudzika chevanoongorora software. Chinangwa chekuedzwa kwekuchengetedza ndechekuchengetedza iyo software ndeyekunze kana kutyisidzira kwemukati kubva kuvanhu uye zvirongwa zvakashata. Kuchengetedzwa kwekuyedza kunoongorora, kunaka kwesoftware mvumo mashandiro, kusimba kwakadii, software inochengeta sei zvakavanzika zve data, software inochengetedza sei kuvimbika kwedata, chii chiri kuwanikwa kwesoftware mune chiitiko chekurwiswa software nevekubiridzira uye zvirongwa zvakashata ndezve Kuchengetedzwa kwekuedzwa kunoda ruzivo rwakanaka rwekushandisa, tekinoroji, network, maturusi ekuyedza ekuchengetedza. Nenhamba yakawedzera yekushandisa kwewebhu, kuyedzwa kwekuchengetedza kwanyanya kukosha kupfuura nakare kose.
Kuedza Kwehutsanana imhando yekuyedza inoitwa zvakanyanya nevanoyedza uye mune mamwe mapurojekiti nevagadziri futi. Kuongorora kwouchenjeri kuongorora nekukurumidza kwesoftware, nharaunda, network, masisitimu ekunze ari kumusoro uye anomhanya, software nharaunda seyakagadzikana zvakakwana kuenderera nekuyedza kukuru. Kuongorora kwouchenjeri kwakamanikana uye yakawanda yenguva bvunzo bvunzo haina kunyorwa.
Scalability Kuedza bvunzo isiri-inoshanda inoitirwa kuyedza imwe yehunhu hwesoftware hunhu i.e. 'Scalability'. Scalability bvunzo haina kutarisisa pane imwechete kana mashoma mashandiro esoftware pane mashandiro esoftware yakazara. Scalability kuyedza kunowanzoitwa neanoshanda enjiniya timu. Chinangwa chekuyera kuyedza kuyedza kugona kwesoftware kuyera pamwe nekuwedzera kwevashandisi, kuwedzera kutapurirana, kuwedzera musayizi yedhatabhesi nezvimwewo, Hazvina basa kuti mashandiro esoftware anowedzera nekuwedzera kwegadziriro yehardware, bvunzo dzekushomeka dzinobatsira kuziva kuti sei kunyanya kuwanda kwebasa software inogona kutsigira nekuwedzera mushandisi base, transaction, dhata yekuchengetedza etc.
Kugadzikana Kwayedza bvunzo isiri-inoshanda inoitirwa kuyedza imwe yehunhu hwemhando yesoftware kureva 'Kugadzikana'. Kugadzikana kuyedzwa kunotarisa pakuyedza kuti software yakagadzikana sei kana iri pasi pemitoro pamatanho anogamuchirwa, mizinga yepamusoro, mitoro inogadzirwa mumipikisi, iine mamwe mavhoriyamu e data kuti agadziriswe. Kuyera kuyera kuchasanganisira kuita mhando dzakasiyana dzekuyedza kuita sekuyera mutoro, kuyedza kushushikana, kuyedza spike, kuyedza soak, kuyedza spike etc.
Static Kwayedza chimiro chekuyedza uko munzira senge ongororo, nzira dzekufamba dzinoshandiswa kuongorora kurongeka kweanogona kuburitswa. Mune static yekuyedza software kodhi haina kuitiswa pachinzvimbo inoongororwa syntax, kutaura, kutumidza musangano, saizi yemabasa / nzira nezvimwe. Kuyedza kwakasimba kunowanzo kuve nemazita ekutarisa kuti ndezvipi zvinoongororwa. Static kuyedzwa kunogona kunyorerwa zvinodikanwa, dhizaini, bvunzo kesi nekushandisa nzira senge ongororo kana kufamba.
Kushungurudzika Kuedzwa imhando yekuyedza kwekuita, mune software inoiswa pasi pehuremu hwepamusoro uye kunyangwe nzvimbo yekuzorora kuti uone kuti software yaizozvibata sei pabreak. Stress kuyedza zvakare kuyedza maitiro eiyo software isina kukwana zviwanikwa senge CPU, Ndangariro, Network bandwidth, Dhisiki nzvimbo etc. Stress kuyedzwa kunogonesa kutarisa mamwe ehunhu hunhu senge kusimba uye kuvimbika.
Kuedzwa kweSystem izvi zvinosanganisira akawanda software yekuyedza mhando dzinozogonesa kumisikidza software seyakazara (software, Hardware, uye network) zvinopesana nezvinodiwa zvayakavakirwa. Mhando dzakasiyana dzeyedzo (GUI kuyedza, Kuyedza kushanda, Kuyedza kudzora, kuongorora kweutsi, kuyedza kushushikana, kuyedzwa kwekuchengetedza, kuyedza kushushikana, kuyedzwa kweAd-hoc nezvimwe,) kunoitwa kupedzisa kuyedzwa kwesystem.
Soak Kuedza imhando yekuyedzwa kwekuita, uko mune software inoiswa pasi kutakurwa kwenguva yakakosha yenguva, kuyedza soak kunogona kuenderera kwemazuva mashoma kana kunyangwe kwemavhiki mashoma. Soak kuyedza rudzi rweyedzo inoitwa kuti uwane zvikanganiso zvinokonzeresa kushomeka kwesoftware performance nekuenderera mberi kwekushandisa. Soak kuyedza kunoitwa zvakawandisa zvemagetsi zvigadzirwa, izvo zvinotarisirwa kumhanya zvichiramba kwemazuva kana mwedzi kana makore pasina kutangazve kana kudzoreredza. Nekukura kwewebhu kunyorera kunyorovera kwakawana kukosha kwakakosha sezvo kuwanikwa kwewebhu webhu kwakakosha mukuchengetedza uye kubudirira kwebhizinesi.
Sisitimu Yekubatanidza Kuedzwa inozivikanwa seSIT (muchidimbu) rudzi rweyedzo inoitwa nechikwata chekuyedza software. Seizvo zita rinoratidzira, tarisiro yeSystem yekubatanidza kuyedza kuyedza zvikanganiso zvine chekuita nekubatanidzwa pakati pekushandisa kwakasiyana, masevhisi, wechitatu bato revatengesi manyorerwo nezvimwe, Sechikamu cheSIT, mamiriro ekupedzisira kusvika kumagumo akaedzwa ayo angangoda software kuti iwirirane. (tumira kana kugashira data) nemamwe mafambiro ekumusoro kana ezasi, masevhisi, mafoni ekushandira wechitatu etc.
Kuedzwa kwechikamu imhando yekuyedza inoitwa nevakagadzira software. Chikamu chekuyedza chinotevera chena bhokisi kuyedza nzira uko mugadziri anozoedza mayuniti einowanikwa kodhi senge zvirevo, matavi, mabasa, nzira, chinongedzo muOOP (chinhu chakanangana nehurongwa). Chiyero cheyuniti chinowanzo sanganisira mukugadzira stubs uye madhiraivha. Yuniti bvunzo vakwikwidzi vakanakira otomatiki. Automated bvunzo dzinogona kumhanya seYuniti regression bvunzo pane nyowani inovaka kana nyowani vhezheni yesoftware. Kune akawanda anobatsira ekuyedza mayunifomu anoshanda seJunit, Nunit nezvimwe, zviripo izvo zvinogona kuita kuti kuyedzwa kwechikwata kubudirire.
Usability kuyedza imhando yekuyedzwa kwesoftware inoitwa kuti unzwisise kuti software yacho inoshandisa mushandisi sei. Chinangwa chekuedzwa kwekushandisa kubvumira vashandisi vekupedzisira kushandisa software, kucherechedza maitiro avo, maitiro avo emanzwiro (vangave vashandisi vaifarira kushandisa software kana kuti vakashushikana vachishandisa? Nezvimwewo,) uye kuunganidza mhinduro yavo pamusoro pekuti software yacho ingaitwe sei yakawanda useable kana mushandisi zvine ushamwari uye kuisa shanduko dzinoita kuti software ive nyore kushandisa.
Mushandisi Kubvuma kuyedzwa (UAT) Mushandisi Kugamuchira kuyedza kunofanirwa kune chero chirongwa. inoitwa nevatengi / vekupedzisira vashandisi veiyo software. Mushandisi Kugamuchira kuyedza kunotendera maSMEs (Nyaya dzenyanzvi nyanzvi) kubva kumutengi kuyedza software neyavo bhizinesi chairo kana chaiwo-epasi zviitiko uye kutarisa kuti software yacho inosangana nezvinodiwa zvebhizimusi.
Kuongorora kwevhoriyamu iri isiri-inoshanda mhando yekuyedza kunoitwa neanoshanda enjiniya timu. Kuongorora vhoriyamu ndeimwe yemhando dzekuyedza kuita. Vhoriyamu kuyedzwa kunoitwa kuti uwane mhinduro yeiyo software nehukuru hwakasiyana hwe data iri kutambirwa kana kugadziriswa nesoftware. Semuenzaniso. Dai iwe waizoedza izwi reMicrosoft, kuyedza vhoriyamu kwaizove kuona kana izwi reMS rinogona kuvhura, chengetedza uye shanda pane mafaera ehukuru hwakasiyana (10 kusvika 100 MB).
Kunetseka Kuedzwa zvinosanganisira kuzivisa, kufumura software, Hardware kana network Zvipingamupinyi zvinogona kushandiswa nevanobira uye zvimwe zvirongwa zvinokuvadza zvinofarira hutachiona kana makonye. Vulnerability Kuedzwa ndiko kiyi kune software chengetedzo uye kuwanikwa. Nekuwedzera kwevabiridzi uye zvirongwa zvakashata, Kuedzwa kweVulnerability kwakakosha pakubudirira kweBhizinesi.
White bhokisi Kuedzwa White bhokisi kuyedza inozivikanwawo seyekuyera bhokisi kuyedzwa, yakajeka bhokisi kuyedza uye girazi bhokisi kuyedzwa. White bhokisi kuyedza inzira yekuyedza software, iyo inotarisira kuyedza software neruzivo rwekushanda kwemukati meiyo software. Chena bhokisi rekuyedza nzira inoshandiswa muYuniti kuyedza iyo inowanzoitwa nevanogadzira software. White bhokisi kuyedza rinotarisira kuita kodhi uye bvunzo zvirevo, matavi, nzira, sarudzo uye dhata kuyerera mukati mechirongwa chiri kuyedzwa. Kuongororwa kwebhokisi chena uye kuyedzwa kweBlack bhokisi kunoenderana sezvo imwe neimwe yenzira dzekuyedza iine mukana wekufumura chikamu chakakanganiswa.
yakanakisa kesi ye droid maxx
iri pixel iri nani pane iphone
verizon 4th yaJuly kutengeswa 2020
Yakanakisa Samsung Galaxy Cherekedza 4 bhatiri kesi
Iyo iPhone SE 2 haisi kubuda gore rino ... kana nakare kose
Samsung Galaxy S6 uye S6 kumucheto skrini uye kutsiva bhatiri kunodhura
Verizon inovhara zvitoro zvine-kambani; vamwe vatengesi vane mvumo vanoramba vakavhura
Zvese zvitsva zveNetflix neHBO Nyamavhuvhu 2019 zvinoburitswa - mafirimu, nhepfenyuro dzeTV uye zvemukati zvirimo
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Ongororo
AT & T inosvitsa Nhare Yekugovana Inobatsira; chirongwa chitsva chinoburitsa Nyamavhuvhu 21 uye chinobvisa kuwanda